अर्काको श्री’मती अर्कैको श्री’मान सँग।दुवै पि’डित रुदै मि’डियामा!( भिडियो सहित):: Mero Desh
अर्काको श्री’मती अर्कैको श्री’मान सँग।दुवै पि’डित रुदै मि’डियामा!( भिडियो सहित)
Published on: ३० चैत्र २०७७, सोमबार ०१:११
काठमाडौं ।”श्रीमा’नले आफु ‘आफ्नी श्रीमती र प्रेमिका लाई एकै बिस्तारा मा सु’ताएपछि श्रीम’ती रु’दै मि’डिया मा आएकी छिन्।सुर्खेत निवासी जानकी सारु मगर र दाङ निवासी दिल बहादुर घर्ति मगर बीच प्रेम भयो। उनीहरुको प्रेम अ”बैधानिक भयो किनकि दुवै जना बि”बाहित पनि थिए।
जा’नकी बा’लबच्च्चा कि आ’मा थिइन् , भने दिल बहादुर पनि बाल बच्चा क बुबा थि’ए। उनीहरु या आपस मा घर बारे थिए।घरबारे भए पनि उनीहरु बीच प्रेम भयो। जानकी दिल बहादुर को घरमा आउने र जाने गर्थिन। उनीहरु बीच प्रेम भएको कुरा सबै थाहा थियो। अहिले एकाएक जानकी र दि’ल बहदुर हराएका छन्।
दुवै जना एकै समयमा हरा’एको हुदा दुवै जना संगै छन् भनि परिवार ले भनेका छन्। जानिकी को श्रीमान श्रीमती को खो’जि मा आएका छन् भने दिल बहादुर कि श्रीमती श्री’मान खोज्न आएकी छिन्।विदेश गएका श्रीमान नेपाल आए पछि म सुर्खेत जान्छु मेरो काम छ भनि दुुई चार दिन बसेर आएका थिए।
म संग नभएर गाग्री बेचेर पठाएकी थिए। श्री’मान सुर्खेत बात आएपछि भएको एउटा घडेरी बेचम भनेपछि हामी बेचिम।बाह्र लाख मा हिजो जग्गा बेचिम अर्को दिन बिहान ५ बजे पैसा सहि’त श्रीमा’न गायब भए। धेरै ठाउ सम्पर्क गरे कहिँ पता लागेन। मलाई जा’नकी को बारेमा धेरै कुरा थाहा थियो त्यसैले जानकी को घरमा सम्पर्क गर्दा उ पनि भा’गेको रहेर। त्यसैले मलाई लाग्छ उनीहरु दुवै एकै ठाउ मा छन्।
यो पनि यो पनि काठमाडौं ।दाङ एक सा’मान्य परिवारमा जन्मेकी उर्मिला कुसुण्ड अहिले नेपालको एक कार्यक्रम ” द भ्वाईस् अफ नेपाल ” सिजन ३ मा छा’निएकी छि’न। राम्रो स्वर भएको कारणले उर्मिला ले अहिले सम्म धेरै गीत हरु बजार मा ल्या’उने तयारी मा छिन।उर्लिमा मा यस्तो स्वर छ कि उनको स्वरमा जो कोहि पनि फिदा हुन्छन।
उर्लिमाको घरको स्थिति कम्जोर भएको का’रण ले उनले यो कला’कारिता क्षेत्र लाई अगाडी बढाउन सकेकी छैनन्। घरमा बुबा आमाको पनि जागिरहरु केहि नभएको र कृषि पेशामा काम गरेर आफ्ना छोरा-छोरिहरु लाई राम्रो शिक्षा दिन सकेका छन।राम्रो स्वर भएको कारणले गर्दा अहिले उर्मिला को लागि चारै जना जज हरु लाई फर्काउन सफल भए’की छिन् ।
धेरै धेरै खुशी लाग्यो । भ्वाईस् अफ नेपालको ब्ल्यान्ड अडिस’नमा चारै जना जज् को मन जित्न सफल भई सेलेक्ट भएकोमा। आज भन्दा केहि महिना अगाडी पनि MechiKali Khabar मा’र्फत भोजराज थापा ले लिएको अन्तर्वार्ता मा उर्मिलाको स्वर लाई धेरै ले मन पराएका थिए।
उर्मिला कुसुण्डाले धेरै राम्रो गीत गाउने हु’नाले उनि आज द भ्वाइस अफ नेपाल मा सेलेक्ट हुन् सफल भईन। गीत राम्रो मानेर चारै जना जज हरु फर्के पछि उर्मिला ला’ई एउटा ज’ज छा’न्न सारै गा’र्हो भएको थियो। अब को पालो मा उर्मिला ले गाएको यो गीत हेर्नुहोस।
यो पनि देशभरी १३४ जना जनसङ्ख्या भएको कुसुण्डा जातिको प्रतिनिधित्व गर्दै द भ्वाईसमा गित गुन्जियो सक्दो शेयर गर्नुस्!दाङको एक सामान्य परिवारमा जन्मेकी उनै उर्मिला कुसुण्ड अहिले नेपालको एक कार्यक्रम ”द भ्वाईस् अफ नेपाल ” सिजन ३ मा छानिएकी छि’न।
राम्रो स्वर भएको कारणले उर्मिला ले अहिले सम्म धेरै गीतहरु बजार मा ल्याउने तयारी मा छिन।उर्लिमा मा यस्तो स्वर छ कि उनको स्वर मा जो को’हि पनि फिदा हुन्छन। उर्लिमाको घरको स्थिति कम्जोर भएको कारण ले उनले यो कलाकारिता क्षेत्र लाई अगा’डी बढाउन सकेकी छैनन्।
घरमा बुबा आमाको पनि जागिरहरु के’हि नभएको र कृषि पेशामा काम गरेर आफ्ना छोरा-छो’रिहरु लाई राम्रो शिक्षा दिन सकेका छन।राम्रो स्वर भएको का’रणले गर्दा अहिले उ’र्मिला को लागि चारै जना जज हरु लाई फर्काउन सफल भएकी छिन् धेरै धेरै खुशी लाग्यो ।
भ्वाईस् अफ नेपालको ब्ल्यान्ड अडिसनमा चारै जना जज् को मन जित्न सफल भई सेलेक्ट भएकोमा। आज भन्दा केहि महिना अगाडी पनि MechiKali Khabar मार्फत भोजराज थापा ले लिएको अन्तर्वार्ता मा उर्मिलाको स्वर लाई धेरै ले मन पराएका थिए।